စနစ်ကိုတိုက်ခိုက်တယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဂိမ်းတွေအားလုံးကိုခိုးယူခဲ့ပါဘူး။ ကျနော်တို့နေဆဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းပေးဆောင်ဖို့လုံလောက်တဲ့ပိုက်ဆံအောင်နေချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ပေါ်တက်အဆုံးသတ်သူမည်သူမဆိုမှအခမဲ့အဘို့ထိုသူတို့အားလုံးပူဇော်နိုင်သည့်မှတဆင့်တစ်ဦးပြုင်တပြိုင်နက်တည်းလည်းသူတို့ကိုဖန်တီးသူဆပ်ဖို့။ ကျနော်တို့ပါဝင်ပတ်သက်အားလုံးပါတီများအတွက်အခမဲ့လိင်ပြွန်အမြတ်အစွန်းကိုဖန်ဆင်းသောတူညီတဲ့အစီအစဉ်ချမှတ်ကြသည်,ကျနော်တို့ဂိမ်း,ကြှနျုပျတို့သညျဤဆိုက်ပေါ်တွင်ရှိသည်,သင်တို့ရှိသမျှသည်ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်အကြောင်းကိုမေ့လျော့စေမယ့်ဖြစ်ကြောင်းလုံလောက်သောယုံကြည်သောကြောင့်. သငျသညျအမှတ်တံဆိပ်အသစ်နှင့်စွဲငြိဖွယ်ရာဖြစ်ကြောင်းဂိမ်းအတွက်ယခုမှကစားသွားကြသည်။, အဲဒီဂိမ္းေတြမွာသင္ရထားတဲ့အေတြ႕အၾကံဳေတြကသင့္ရဲ႕ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚမွာလူၾကည့္မ်ားေနတဲ့အခါသင္ရတဲ့အရာေတြထက္အမ်ားႀကီးေက်နပ္စရာျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ ငါတို့သည်သင်တို့အခမဲ့လိင်ပြွန်အပေါ်ရှာတွေ့အဖြစ်ရုံအဖြစ်အများအပြားအမျိုးအစားကနေဂိမ်းရှိသည်။ ပြီးတော့ငါတို့မှာဂိမ်းကမ္ဘာနဲ့တိကျတဲ့အမျိုးအစားတွေရှိတယ်။
ကျနော်တို့ကဒီစုဆောင်းမှု၌ရှိသမျှသောဂိမ်းယခုအချိန်တွင်အကောင်းဆုံးဂရပ်ဖစ်အချို့နှင့်အတူလာမယ့်နေကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ပေါ်ရှိအရာအားလုံးသည်ဂိမ်းများ၏မျိုးဆက်မှဖြစ်ပြီးသင်ဤတွင်မည်သို့အံ့သြဖွယ်ရာရွေ့လျားသည်ကိုယုံကြည်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အစစ်အမှန်လည်းကစားသမားဂိမ်း၏ဤမျှလောက်များစွာသောရှုထောင့်ထိန်းချုပ်များ၏လွတ်လပ်မှုကိုပေးကြောင်းလှုပ်ရှားမှုနှင့်ရူပဗေဒအင်ဂျင်များကပေးထားသည်။ ဂိမ္းအသစ္ေတြရဲ႕ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြဟာအရင္ေရာက္လာတဲ့အရာေတြထက္ေနာက္ထပ္အားသာခ်က္တစ္ခုရွိပါတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာ၊ဖုန္း၊တက္ဘလက္စတဲ့ဘယ္ကိရိယာမွာမဆိုဂိမ္းကစားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။, ရုံကစားခလုတ်ကိုထိမှန်နှင့်ဂိမ်းသင့်ရဲ့ဘရောက်ဇာကိုအတွက်တက်ဝန်။ သင်ပင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ပေါ်တွင်မှတ်ပုံတင်ရန်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာဒီမှာလူတိုင်းအတွက်အားလုံးအခမဲ့လိင်ဂိမ်းကစားခြင်းပဲ!
အခမဲ့တိုက်ခိုက်ခံရလိင်ဂိမ်းများစုဆောင်းခြင်းနှင့်အတူသင်တို့သည်နောက်အခြားလိင်ဂိမ်းကစားဆိုဒ်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းဂိမ်း၏နာရီရာပေါင်းများစွာရှိသည်နှင့်ဆိုက်သည်ပုံမှန်ဂိမ်းအသစ်များရရှိနေသည်။ နှင့်ဂိမ်းအင်တာနက်ပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးဖွံ့ဖြိုးပြီးခေါင်းစဉ်ကနေဖြစ်ကြသည်။ သူတို့အတွက်အရာအားလုံးဒါအစစ်အမှန်ခံစားရပါလိမ့်မယ်,ထိုတည်ဆောက်သူများဂရုတစိုက်ကစားသမားမှအာရုံကိုပေးမယ့်ညစ်ညမ်းဂိမ်းအပေါငျးတို့သဒြပ်စင်ကိုအသုံးပြုသောကြောင့်. လိင်အသားပေးဇာတ်ကားတွေမှာဆိုရင်မျက်လုံးချင်းဆုံအောင်ဇာတ်ကောင်တွေနဲ့မတူတဲ့ရှုထောင့်ကနေကစားကြမှာအမှန်ပါပဲ။, သင်တို့ရှိသမျှသည်သူတို့၏တွင်းထဲမှာထည့်ထားနိုင်ပါလိမ့်မည်,သင်သည်သူတို့၏အလောင်းတွေအပေါ်ဘယ်နေရာမှာမဆိုရလိမ့်မည်နှင့်သင်ပင်အချို့ဂိမ်းအတွက်သူတို့ရဲ့ပွဲစိတ်ကြိုက်သူတို့ကိုသင်လိုချင်သောသူမည်ကဲ့သို့ကြည့်ရှုစေနိုင်သည်။ ကာတြန္း၊ကာတြန္း၊ပင္မေရစီးေၾကာင္းဗီဒီယုိမ်ားမွအခ်ိဳ႕ေသာေက်ာ္ၾကားေသာဘေလာ႔ဂါမ်ားႏွင္႔ လိင္ဆက္ဆံမႈမ်ားလည္းရွိပါသည္။
သင်တစ်ဦးစိတ်ကူးယဉ်အသက်ရှင်နေထိုင်ချင်တယ်ဆိုရင်,ထို့နောက်သင်ရှိသည်သောလိင်ဂိမ်းများစုဆောင်းခြင်းနှင့်အတူညစ်ပတ်ရဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ သင်၏မဖွယ်မရာဆန္ဒများကိုနှစ်သက်လိုသည်ဟုဆိုကြပါစို့။ ထွက်ဂိမ်းနှင့်အတူသင်အမေ၊သမီးများနှင့်ညီအစ်မများ၊ဒါပေမယ့်လည်းသူတို့သင်အမှန်တကယ်ဆက်စပ်နေကြတယ်တူသောခံစားရ။ လိင်မဆက်ဆံခင်သူတို့နဲ့အတူရှိနေတဲ့အပြန်အလှန်ဆက်ဆံမှုအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သင်သည်သူတို့ကိုသွေးဆောင်ဖြားယောင်းရန်သို့မဟုတ်သူတို့ကိုလှည့်စားရန်လိုအပ်လိမ့်မည်သူတို့သည်သင့်သား၊ဖေဖေသို့မဟုတ်အစ်ကိုကိုခေါ်သောအခါသင်၏ကြက်သည်ပေါက်ကွဲလိမ့်မည်။, ဒါကဘယ်တော့မှမေအမေကစားအမျိုးသမီးသင်အကြိုက်ဆုံးညစ်ညမ်းကြယ်ပွင့်သည်နှင့်သူမ၏ထင်ထင်-ဖြစ်သားဂျန်နီအပြစ်များဖြစ်ပါတယ်ထားတဲ့အတွက်ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်များတွင်ဖြစ်ပျက်ဘယ်တော့မှမ။
ကျနော်တို့ထွက်ရှိမဆိုအခမဲ့လိင်ပြွန်နှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်ချင်တယ်,ဒါကြောင့်ကျနော်တို့သူတို့ပြုသောအမှုအရာပူဇော်ဖို့လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ အခမဲ့တိုက်ခိုက်ခံရလိင်ဂိမ်းသင်တို့သည်နောက်မှတ်ပုံတင်ရေးနှင့်အတူဆော့ကစားပါစေပါလိမ့်မယ်။ မသာကြောင်း,ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်တွင်,သင်သည်လည်းအဘယ်သူမျှမမှတ်ပုံတင်နှင့်အတူအသိုင်းအဝိုင်းအင်္ဂါရပ်များကိုခံစားနိုင်ပါလိမ့်မည်။ အကယ်၍သင်သည်ဂိမ်းတစ်ခုကြိုက်နှစ်သက်ပါက၎င်းကိုမှတ်ချက်ပေးရန်တွန့်ဆုတ်မနေပါနှင့်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်တွင်ကြော်ငြာများတပ်ဆင်ထားသော်လည်းထိပ်တွင်၊ကြော်ငြာများသည်သူတို့အကြီးမားဆုံးအခမဲ့လိင်ပြွန်များပေါ်တွင်ရှိနေသကဲ့သို့ပင်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသည်။ သင်ပင်သူတို့ကိုသတိထားမိမည်မဟုတ်သူတို့သည်သင်၏ချစ်ရာသခင်သည်ဂိမ်းအရေးယူပျော်မွေ့သင်၏လမ်း၌ရဘယ်တော့မှမ။